Iwo matatu Ekuyera eakaenzana Email Kushambadzira Strategic | Martech Zone
Chipiri, January 26, 2016 Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Vazhinji vatengesi vanotarisa zano ravo rekushambadzira email kungoita pakuburitsa goho uye nekuita kweemail. Izvi zvinorasikirwa nemimwe mihombe mikuru iri kukanganisa budiriro izere yekambani yako kukwikwidza kupesana nebhokisi rekunyora iro rakakwiridzirwa kumusoro kune vateereri vako.
Pane zviyero zvitatu kuongororo ipi neipi inoitwa mushure mekushambadzira kweemail:
Email Kuendesa - izvi ndezvekuti kana yako email yakazviita kuinbox. Iko kusanganisa kwehutsanana hweemail yako rondedzero, mukurumbira weako IP kutumira kero, kuvimbika kweiye email sevhisi webasa (ESP), kuwedzera kune izvo zvemukati zvauri kuburitsa. Pazasi mutsara - mangani emaemail ako akaigadzira kuinbox, ichidzivirira iyo isina junk folda kana kubhurwa. Vazhinji vanhu havana hanya neizvi, kunyanya avo vasina ESP yakanaka. Nekudaro, kununurwa kunogona kurasikirwa nekambani yako kurasikirwa nehukama nemari. Tinoshandisa 250ok to tarisa yedu inbox kuiswa.
Maitiro Ekunyora - ava ndivo vanogamuchira, kana kunyorera, kune yako email. Vakavhura here? Dzvanya-kuburikidza kana Dzvanya-Kupfuura Rate (CTR)? Kutendeuka? Izvi zvinowanzo kuyerwa se "yakasarudzika" kuverenga. Ndokunge, iyo kuverenga ndeyeyeye nhamba yevanyoreri vakavhura, vadzvanya, kana kushandurwa ... kuti isakanganiswa nenhamba yakazara yemavhura, tinya-kuburikidza, uye shanduko. Chikamu chakanaka cherondedzero yako chinogona kunge chisiri kushanda - iwe urikuitei kuti utangezve kuita navo?
Email Zvemukati Performance - ndozvakaita zvirimo zvako. Ndeapi aive akazara akazara, kubaya-kuburikidza, uye kutendeuka? Masangano ako airevei? Uri kupatsanura zvemukati zvako kuti zvirinani zvifanane newanyoreri? Yakaburitswa zvine simba zvemukati, runyorwa chidimbu, uye kumwe kusarudzika kuri kuwedzera zvakanyanya kuita kweemail mitengo.
Sezvaunofambira mberi, iwe unofanirwa kunge uchifananidza mushandirapamwe wako kuita pamatanho aya pamushandirapamwe wega wega uye yega runyorwa kana chidimbu. Izvo zvinokutendera iwe kuti ukurumidze kukanda mukati pane pane ako mairi nyaya!
Tags: email yakadzikama zanoyakadzikama zanomiganhuEmail Marketingemail kushambadzira zano